Nambarany fa vokatry ny tsy fahampian’ny solika no nahatonga iny fahapatahan-jiro iny. Ny teny amin’ny toeram-piasan’ny birao mahaleotena misahana ny fifidianana ihany na ny CENI no tsy maintsy nitadiavam-bahaolana ialana amin’ny korontana mety hitranga. Efa nahita vahaolana ny orinasa JIRAMA sy ny kaompania mpamatsy solika mba hahafahan’ny isan-tokantrano manao fety am-pilaminana. Ankoatra ny tsy fahampian-tsolika moa dia nanazava ireo karazana olana amin’ny fitrandrahana ireo renirano mba hahazoana herinaratra ihany koa izy. Nambarany fa efa ambany dia ambany ny rano etsy Mandroseza amin’izao vokatry ny tsy fahampian’ny rotsak’orana. Toraka izany koa ny any Mantasoa sy Mandraka, antony miteraka ny fahatapahan-jiro matetika. Efa miezaka anefa ny minisitera izay tarihiko mitady vahaolana maharitra mahakasika izany hamaliana ny hetahetan’ny mpanjifa. Nofaranana omaly ohatra ilay fivoriana niarahana tamin’ny consortium hamatsiana herinaratra mateza ho an’ny isan-tokantrano. Kasaina ho vita amin’ny volana oktobra taona 2019, ohatra, ny fametrahana fotodrafitrasa eny Mahitsy izay hanana tanjaka 220 Megawatt. Nomarihin’ny minisitra moa fa tsy ho an’ny mponin’Antananarivo irery izany fa ezahina hipariaka manerana ny faritra maro.